HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMaamulaha Guud ee EGO Alkaş wuxuu la yimid Masuuliyiinta iskaashiga Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka ah
01 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
agaasime guud alkas gaar ahaana wuxuu la kulmay saraakiisha iskaashatada gaadiidka dadweynaha
Maareeyaha Guud ee EGO Nihat Alkaş, Maareeye kuxigeenka Guud Fatih Eryilmaz ayaa la kulmay saraakiisha iskaashiga Gaadiidka Dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee ka kala yimid degmooyinka. Alkaş, khudbadiisi uu ka jeediyay kulanka, “Howshayada ugu muhiimsan, dadka reer Ankara ee ku hoos jira xaaladaha ugu wanaagsan, ugu raaxada badan, sida ugu dhaqsaha badan, gaadiidka ugu dhaqaala badan iyo waara,” ayuu yidhi.
Xarunta wicitaanka iyo khadadka isgaarsiinta ee inta badan codsiyada iyo cabashooyinka ka imanaya Hay'adda oo sheegaya in gaadiidku asal ahaan ka yimid Alkaş, Saraakiisha Gaadiidka Dadweynaha Gaarka ah inay u hoggaansamaan saacadaha adeegga, qawaaniinta taraafikada, iyo gaar ahaan waxay ka codsadeen shacabka inay ku dhaqmaan dhaqan xumo.
Alkaş wuxuu yidhi waxay rabaan inay xalliyaan dhibaatooyinka iyagoo la kaashanaya dhammaan daneeyayaasha oo ay isla garteen inay heli doonaan moodalkii ugu habboonaa ee gaadiidka dadweynaha wada socda. Isagoo tilmaamay in xallinta-ku saleysan iyo xallinta fikradaha ay muhiim u tahay fahamka degmada bulshada, Alkaş wuxuu intaas ku daray inay heli doonaan tan ugu wanaagsan, xaq iyo kuwa ugu quruxda badan oo ay weheliyaan fahamkan.
Madaxa Waaxda Howlgallada Basaska Mustafa Geyikçi ayaa sidoo kale ka qeybgalay kulanka halkaas oo la dhageystay dalabaadka Saraakiisha Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay.
Saxafiyiinta Jarmalka Antalya Transportation Inc. waxay kormeeraan taraamyada ay la leeyihiin saraakiisha
Wareysi gaar ah oo lala yeeshey maareeyaha guud ee TCDD Süleyman Karaman: Tareenka xawaaraha sare wuxuu ahaa riyo,…
Wadashaqeynta Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka ah
Iskaashiga Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka ah ee Ankara